समाचार – Page2– mero sathi tv
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:४५ April 30, 2018
LeaveaComment on यस्ता खानेकुराहरु सेवन गरिएमा गर्मीमा लूबाट बचिन्छ
तराईमा गर्मीको राप प्रतिदिन बढ्दो छ । गर्मी बढेसँगै तराई क्षेत्रमा तातो हावा चल्न सुरु गर्छ । एकातिर घामको राप, अर्कोतिर तातो हावा । यस्तो अवस्थामा सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । तराईमा अत्याधिक गर्मीको कारण शारीरिक समस्या पनि देखापर्छ । घामको राप र तातो हावाले शरीरको उर्जा सोस्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:४२ April 30, 2018
LeaveaComment on ३२ लाखको सम्झौतामा प्रियंका अब विज्ञापनमा काम गर्ने
ब्रान्ड दुनियाँमा अहिले सम्म नेपाली कलाकारहरु त्यति जम्न सकेका छैनन् । बलिउडका कलाकारको आम्दानीको ठूलो श्रोत विज्ञापन बनाउनु नेपाली कलाकारको सपनानै बनेको छ । तर, पछिल्ला केही समययता भने विज्ञापन कम्पनीहरुले नेपाली कलाकारलाई पनि विश्वास गर्न थालेका छन् । यसैले, केही कलाकारको आम्दानीको बाटो पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । हालै नायिका प्रियंका कार्कीले एक अन्तर्राष्ट्रिय […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:३९ April 30, 2018
LeaveaComment on हिमाल आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परी एक पर्यटकको मृत्यु
धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि गएका एक पर्यटकको मृत्यु भएको छ । १५ हिमाल आरोहणका लागि इटलीका ३७ वर्षीय सिमोन ला तेर्राको हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएको हो । गत शुक्रबारदेखि हराएका उनको शव शनिबार फेला परेको प्रेस्टिज एडभेन्चरका डम्बर पराजुलीले जानकारी दिए । उनको शव सोमबार काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:३५ April 30, 2018
LeaveaComment on मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने समस्या छ
मानिसलाई खाना खाएपछि मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने हुनसक्छ, जसलाई ‘हार्ट बर्न’ भनिन्छ । हार्ट बर्न भन्ने चलन भएपनि मुटु पोलेको होइन । यी लक्षणलाई मेडिकल शब्दाबलीमा जी.ई.आर.डी (ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज) भनिन्छ । अन्ननली र आमासयको बीचमा एउटा भल्भ हुन्छ अन्न नलीबाट खाना जाने बेलामा केही खुकुलो हुने यो मासंपेशी अरु […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:२४ April 30, 2018
LeaveaComment on ​सावधान ! कतै मैनबत्ती निभाएर आफ्नो जन्मदिन मनाउने गर्नुभएको त छैन ?
अहिले हामीकहाँ पनि जन्मदिन मनाउने कुरा चलनकै रुपमा विकास भयसक्यो । औसतमा जन्मदिनमा केक काट्नु साधारण हो । त्यसमा हामी केक काट्नुभन्दा अघि बालिएको मैनबत्ती निभाउने गर्छौं । तर, विज्ञहरुले यस्तो गर्नुलाई खराब भनेका छन् । र, यस्तो गर्नेलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । युएसको क्लेम्सन युनिभर्सिटीका फुड सेफ्टी प्रोफेसर पल डावसनले अनुसन्धानमार्फत् पत्ता लगाएका […]
हातको छाला तथा खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने अब यो सरल घरेलु उपचार विधि अपनाएर निको पार्नुहोस
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:०३ April 30, 2018
LeaveaComment on हातको छाला तथा खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने अब यो सरल घरेलु उपचार विधि अपनाएर निको पार्नुहोस
जब हाम्रो शरीरको कुनै अंग अर्थात् छाला बाहिरी कुनै कडा वस्तुसँग नियमित रुपमा घर्षण भईरहन्छ तब उक्त छालाले त्यस वस्तुबाट जोगिनका लागि कडा छालाको आवरण बनाउँदै जान्छ । र यस्तो कडा छाला जलाई क्याल्स भनिन्छ । यस्तो कडा छाला विशेषगरी हात र खुट्टाको पैतालाको पछाडिको भाग कुर्कुच्चा फुट्ने/चर्किने गर्दछ । यस्तो समस्या प्राय धेरै मानिसहरुलाई […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ११:१७ April 30, 2018
LeaveaComment on नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
प्रायजसो गर्मी मौसममा नागबाट रगत बग्ने समस्याले धेरैलाई पिरोलेको हुन्छ।बोलचालको भाषामा यसलाई नाथ्री फुटेको भनिने गरिन्छ।कसैलाई गर्मीखाले खानेकुरा खाने वित्तिकै नाकबाट रगत बग्ने गर्छ भने कसैलाई यत्तिकै पनि रगत बग्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ। विभिन्न संक्रमण, अत्यधिक गर्मी र नाक सुख्खा हुँदा नाकबाट रगत बग्ने (नाथ्री) समस्या बढी हुनेगर्छ।संक्रमणकै कारणले यस्तो हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। रगत जमाउने […]
मिडियाको सामु नै माताको शक्ति देखेर यसरी धुरुधुरु रोए यी बिरामी बालकका परिवार
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:२७ April 30, 2018
LeaveaComment on मिडियाको सामु नै माताको शक्ति देखेर यसरी धुरुधुरु रोए यी बिरामी बालकका परिवार
आजको युग आधुनिकताको युग हो। हाम्रै देशमा नै हेर्ने हो भने पहिलाको दाँजोमा मानिसहरु लगभ ८० प्रतिशत साक्षर छन्। यसकारण मानिसहरु पुराना परम्परामा पनि राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष आफ्नो सो विवेकले छुट्टाउन सक्छन। अहिले मानिसहरु नयाँ संस्कृतिलाई अंगाल्दै आफ्नो सस्कृतिको राम्रो पक्ष् समेट्दै अघि बढिरहेका छन्। पहिला मानिस विरामी हुँदा धामी, झाक्री कहाँ धाउने गर्दथे […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:१३ April 30, 2018
LeaveaComment on जसले शरीरलाई क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउँछ यी खानेकुले
क्यान्सर आफैमा भयावह रोग हो । यो रोगको कारण दिनदिनै हजारौंले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्, त्यो पनि अत्यान्तै पीडादायक ढंगले । त्यसैले क्यान्सर रोगको नाम सुन्नसाथ हामी डराउँछौं । क्यान्सरको उपचार जटिल र महंगो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त असंभव पनि । अप्ठ्यारो त के भने, सुरुवाती अवस्थामा क्यान्सर रोग लागेको थाहा हुँदैन । जतिबेला थाहा […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:०९ April 30, 2018
LeaveaComment on बेमौसमी आँप: मुखलाई काइदा, स्वास्थ्यलाई वेफाइदा !
हिजोआज बजारमा प्रशस्त मात्रामा आँप पाइन्छ । हेर्दै रहर लाग्ने यस्ता आँप देख्नासाथ खाउँखाउँ लाग्नु स्वाभाविकै हो । यस्ता आँप विभिन्न स्वाद तथा नामका साथ उपलब्ध छन् । व्यापारीहरूले आँपलाई बेलै नपुगी पकाएर बजारमा ल्याइरहेका छन् । आँप खाने मौसम भनेको जेठ र असार महिना हो । यो समयमा आँप प्राकृतिक रूपले नै पाकेर खानयोग्य […]